I-China i-Eco-friendly Wood Composite Co-extrusion ye-WPC yokuThengisa abavelisi kunye nabathengisi | ULihua
Eco-friendly Wood edityanisiweyo Co-extrusion WPC Decking
Ubunini beMveliso:Ukuhamba kweWPC
Ixabiso:$ 4.88 / UM
Ixesha lokukhokhela:10-15 IINTSUKU
2.2m, 2.9m okanye wena
Ipaki, Imbonakalo yomhlaba, iqonga langaphandle
Ibrashi okanye iSanding
● Ukudityaniswa kwe-co-extrusion, itekhnoloji yakutshanje kuluhlu lweenkuni, obu buchwephesha bekhompyuter buhambisene nomxholo, izinto zayo ezingaphezulu ezikhethiweyo zezona zinto zinika ibhodi nganye ukusebenza okukhethekileyo kunye nokugqwesileyo. Iipropathi zokwambathisa ikepusi zenza ibhodi yokudibanisa , umphezulu awuyi kwanda kunye nekhontrakthi njengezinye izinto ezidityanisiweyo, ngeli xesha ukufakwa kobushushu obuphantsi kuthetha ukuba iinyawo ezingenanto ziya kuyithanda, kunye nokuzinza kwayo okuphezulu kwe-UV umbala wayo ongaphakathi uza kuhlala iminyaka.
● I-co-extrusion okanye iibhodi ezinamakhonkco ezinqabileyo ziibhodi zesizukulwana sesibini se-WPC. Ziyilelwe ngesembozo esidityaniswe kumbindi webhodi ngexesha lokuvelisa. … Inkqubo yokudityaniswa kwe-extrusion ibandakanya ukusetyenziswa kwee-antioxidants, imibala kunye nee-inhibitors ze-UV zokwenza isiseko.
● Ibhodi ekhutshwe ngokudibeneyo kaLihua ifezekisa umbala ogqityiweyo ongagungqiyo kunye nothembekileyo, xa kuthelekiswa kuphela nemithi yendalo, obu buchwephesha buqhubele phambili kunye nobuchule buvumela ukudityaniswa kombala okumangalisayo, ukubonelela ngeyona bhodi ibukekayo.
● Imigca emine ye-co-extrusion yokuvelisa, sinokuqinisekisa ukuba ixesha lakho lokuhambisa.Nokukunika ukhetho ngakumbi kuwe.Siza kubeka iimveliso ezigqityiweyo kwindawo ethile, xa unyango lugqityiwe, siya kupakisha ezi bhodi njenge isigqibo sakho.
Slip Resistance Dry EN 15534-1: 2014 Icandelo6.4.2 CEN / TS 15676: 2007 Ixabiso lePendulum≥36 Umda wobude: Kuthetha i-56, iMin 55
EN 15534-4: 2014 Icandelo 4.4 Isikhokelo esithe tyaba: Kuthetha i-73, iMin 70
Isiliphu Resistance Emanzi EN 15534-1: 2014 Icandelo6.4.2 CEN / TS 15676: 2007 Ixabiso lePendulum≥36 Umda wobude: Kuthetha i-38, iMin 36
EN 15534-4: 2014 Icandelo 4.4 Isikhokelo esithe tyaba: Kuthetha i-45, iMin 43
Iimpawu zeFlexural EN15534-1: Isihlomelo A. -F'max: Kuthetha -3300N, Min≥3000N Amandla okugoba: 27.4 MPa
EN 15534-4: 2014 Icandelo 4.5.2 -Ukuchazwa phantsi komthwalo we-500N kuthetha≤2.0mm, Max≤2.5mm Imodyuli yokuqaqamba: 3969 MPa
Umthwalo omkhulu: Kuthetha i-3786N, iMin 3540N
Kuthetha: 0.86mm, Max: 0.99mm
Ukudumba nokufunxwa kwamanzi EN 15534-1: 2014 Icandelo8.3.1 Kuthetha Ukudumba: ≤4% ubukhulu, ≤0.8% ububanzi, ≤0.4% ubude Kuthetha Ukudumba: 1.81% ubukhulu, 0.22% kububanzi, 0.36% ubude
EN 15534-4: 2014 Icandelo 4.5.5 Ukudumba okuphezulu: ≤5% kubukhulu, .21.2% ububanzi, ≤0.6% ubude Ukudumba okuphezulu: 2.36% kubukhulu, 0.23% ububanzi, 0.44% ubude
Ukufakwa emanzini: Kuthetha: 4.32%, uMax: 5.06%
Kuthetha: ≤7%, Max: ≤9%
Ukuchasana nokungeniswa EN 15534-1: 2014 Icandelo7.5 Ubulukhuni bukaBrinell: 79 MPa
EN 15534-4: 2014 Icandelo 4.5.7 Ireyithi yokubuyiselwa kwe-elastic: 65%
Egqithileyo Ukuxhathisa kwemozulu yangaphandle Wood Composite WPC Decking
Okulandelayo: Yangaphandle Co-extruded Wood edityanisiweyo WPC khazi
Isikhokelo sokuFakelwa kweeBhodi
Q1: ingakanani inkampani yakho? Lithini ixabiso lemveliso yonyaka?
Q2: Zeziphi izixhobo zovavanyo onazo?
Q3: Yintoni na inkqubo umgangatho wakho?
Q4: Sithini isivuno semveliso yakho? Yenziwe njani loo nto?
I-Q5: ide kangakanani inkonzo yobomi beemveliso ze-WPC?
I-Q6: Leliphi ixesha lokuhlawula oza kulamkela?
I-Q7: Xa kuthelekiswa neenkuni, yintoni inzuzo yeemveliso ze-WPC?
I-Q8: Ngaba iimveliso ze-WPC zifuna ukupeyinta? Nguwuphi umbala onokubonelela ngawo?
A: Njengomahluko phakathi kweenkuni, iimveliso zeWPC ngokwazo zinombala wazo, zifuna ukupeyinta okungaphezulu. Ngokubanzi, sibonelela ngemibala ephambili eyi-8 njengoMsedare, tyheli, ipayini ebomvu, umthi obomvu, omdaka, ikofu, ngwevu okhanyayo, grey eluhlaza. Kananjalo sinokwenza umbala okhethekileyo ngesicelo sakho ngasinye.
Ixabiso lokumisela iWPC
Manzi Wood edityanisiweyo ezimbini Umbala Co-extrusio ...
WPC decking ngaphandle, WPC decking edityanisiweyo, ezenziwe ngomthi yeplastiki edityanisiweyo, Ukutshekisha ngaphandle kwe-WPC, WPC decking umgangatho, WPC nokwadala,